Ciidanka Qaranka ee ku Sugan Buuhoodle iyo Malleeshiyo Dib isu Urursanaysa oo Madaafiic Iswaydaarsaday | Berberanews.com
Home WARARKA Ciidanka Qaranka ee ku Sugan Buuhoodle iyo Malleeshiyo Dib isu Urursanaysa oo...
Ciidanka Qaranka ee ku Sugan Buuhoodle iyo Malleeshiyo Dib isu Urursanaysa oo Madaafiic Iswaydaarsaday
Buuhoodle (Berberanews)- Ciidammada Qaranka ee toddobaadkan la wareegay gacan ku haynta magaalada Buuhoodle iyo maleeshiyo beeleedyo dib isu urursanaya degaankaasi, ayaa shalay gelinkii hore iswaydaarsaday hubka waaweyn ee madaafiicda.
Kooxaha maleeshiyo beeleedka ah oo degaanno ka baxsan Buuhoodle isku urursanaya ayaa la sheegay inay hub ku soo tuurtuureen fadhiisimada ciidanka qaranka, kadib ay halkaasi ciidammadu ku garaaceen madaafiic badan oo culus, kuwaas oo lagu eryey maleeshiyadaasi nabad-diidka ah.
Madaafiicda ciidanka Qaranku ku garaacay goobaha maleeshiyadu isku urursanaysay oo socotay muddo gaaban ayaan la sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay, balse waxa la xaqiijiyey in malleeshiyadaasi ka guureen goobtaas.
Cutubyo ka tirsan ciidanka Qaranka oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka culus, ayaa si weyn ugu qulqulaayey maalmahanba degaanka Buuhoodle iyo jiida hore ee Gobolka Sool, kuwaaso la sheegay inay ku biirayaan ciidammada Qaranka ee hore ugu sugnaa jiddaas, iyadoo guud ahaan millateriga Somaliland la geliyey heegan culus oo qayb ka ah hawlgallo lagu sugayo xuduudaha iyo qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland.
Dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolladaasi ka socda ayaa muujinaya saansaan colaadeed oo waqti kasta bilaabi karta, waxaanna wararku sheegayaan in degaanka Buuhoodle uu ka jiro barakac dadweynuhu uga qaxayaan cabsi dagaal oo la soo wajahday.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa hore ugu dhawaaqay in ay difaaci doonaan qarannimada Somaliland, isla markaana aanay dawladdiisu oggolaan doonin wax kasta oo wax lagu yeelayo
Previous articleWarbaahinta iyo Doorka ay ka Qaadatay Dagaalkii Ciraaq
Next articleVideo: Maamulka Gobolka Saaxil oo mashiin cusub ku wareejiyay wershada laydhka Berbera oo dhibaato badani ka taagnayd